I-Elm Street Escape- Ukufinyelela Kalula ku-Alton & STL - I-Airbnb
I-Elm Street Escape- Ukufinyelela Kalula ku-Alton & STL
Alton, Illinois, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Mitchell
Balekela ubuhlanya bansuku zonke bese ubuyela kuleli khaya lomlando elilungiswe kabusha ngokuphelele - elimaphakathi ne-Upper Alton. Indawo eyingqayizivele ngempela, leli khaya lamakoloni elivuselelwe ngokugcwele lango-1920s ligqama ngokumelene nendawo elizungezile ngendlela ehlaba umxhwele neyamukelayo.
Ngenkathi indawo enkulu eyi-1 Acre isungula ukwehlukana okuthile nomhlaba wangaphandle, indawo emaphakathi enokufinyelela kalula ezitolo, amakolishi endawo, kanye nedolobha i-STL ilungile.
I-Elm Street Escape yindlu enhle eyakhiwa ngeminyaka yawo-1930s, futhi yavuselelwa kahle ngokuhamba kweminyaka.
Iminyango yephakethe yasekuqaleni kuwo wonke amagumbi okuhlala nawokudlela, izinto zokubala zegranite nemishini emisha ekhishini, kanye nebhavu elihle lokugeza elinekhanda leshawa elikabili, ishawa yemvula.
Inketho yombhede wesi-4 iyatholakala ngokucelwa ngokusetshenziswa kombhede wokudonsa otholakala egumbini lokuphumula. Iminyango ephaketheni kuzo zombili izinhlangothi zegumbi lokuhlala kanye negumbi lokugezela eliphansi elingaphansi liqinisekisa ubumfihlo obuphelele kuleli lungiselelo.
Indawo yethu emaphakathi nomgwaqo ongu-3 inikeza ukufinyelela okulula kukho konke ongakufuna.
Imizuzu engu-3-5: Ithagethi, iLowe's, indawo yezitolo, idolobha lase-Alton, izitolo zasendulo, Isibhedlela i-Alton Memorial
15-20 imizuzu: Principia College, Historic Elsah, Grafton, Edwardsville
Imizuzu engama-30-40: idolobha iSTL, iBush Stadium, iSTL Arch